Bit By Bit - Unxulumano - 6.2.3 elithile
Abaphandi babangela ukuba iikhompyutheni zabantu zivakashele ngasese iiwebhsayithi ezazikhutshwe nguorhulumente ophangaleleyo.
Ngo-Matshi 2014, uSam Burnett kunye no-Nick Feamster baqalisa i-Encore, inkqubo yokubonelela ngexesha langempela kunye nemilinganiselo yehlabathi ye-intanethi. Ukwenza oku, abaphandi, ababese-Georgia Tech, bakhuthaza abanikazi bewebhu ukuba bafake le khowudi encinci kwiifayile ezivela kumaphepha abo ewebhu:
Ukuba kwenzeka ukuba uvakashele iphepha lewebhu kunye nale khowudi yewebhu, i-browser yakho izakuzama ukuqhagamshelana newebsite abaphandi ababeka iliso malunga nokuchithwa okusemandleni (umzekelo, iwebhusayithi yeqela lezopolitiko elivinjelwe). Emva koko, isiphequluli sakho sewebhu siza kubuya kubaphandi malunga nokuba ngaba sikwazi ukunxibelelana newebhusayithi enokuvalwa (umfanekiso 6.2). Ukongeza, zonke ezi zinto aziyi kubonakala ngaphandle kokuba uhlolisise ifayile yefayile ye-HTML yephepha lewebhu. Izicelo zekhasi le-third party ezingabonakaliyo ziqhelekileyo kwiwebhu (Narayanan and Zevenbergen 2015) , kodwa azifaneki zibandakanya iinzame ezicacileyo zokulinganisa ukucandwa.
Umzobo 6.2: Iskimu soyilo lophando lwe-Encore (Burnett and Feamster 2015) . Imvelaphi yewebhusayithi inekhowudi encinci encinane ehlanganisiweyo kuyo (isinyathelo 1). Ikhompyutheni yakho iguqulela iphepha lewebhu, elibangela umsebenzi wokulinganisa (isinyathelo 2). Ikhompyutheni yakho izama ukufikelela ekujoliswe kuyo, ingaba yiwebhusayithi yeqela lezopolitiko elivinjiweyo (inyathelo lesi-3). I-censor, efana noorhulumente, inokuthi ivimbele ukufikelela kwakho kumgca wokulinganisa (isinyathelo 4). Ekugqibeleni, ikhomputha yakho ibonisa iziphumo zesi sicelo kuphandi (ezingaboniswa kumfanekiso). Ikhutshwe ngemvume evela Burnett and Feamster (2015) , isiqendu 1.
Le ndlela yokulinganisa iindawo ezinokwakheka kwezobugcisa. Ukuba inani elaneleyo lewebhu liquka le ncwadana elula yekhowudi, ngoko-ke i-Encore inokubonelela ngexesha langempela, umlinganiselo wehlabathi jikelele wezobhsayithi ezicatshungulwayo. Ngaphambi kokusungula le projekthi, abaphandi baxhomekeke kwi-IRB yabo, enqabe ukuphonononga iprojekthi kuba "yayingekho yophando lwabantu" phantsi koMthetho oqhelekileyo (isethi yemimiselo elawula uphando oluninzi oluxhaswa ngemali e-United States; ngolwazi olungakumbi, sibone isihlomelo sesiganeko ekupheleni kwesi sahluko).
Ngokukhawuleza emva kokusungulwa kwe-Encore, ngoko ke, uBen Zevenbergen, ngoko waba ngumfundi ophumeleleyo, waqhagamshelana nabaphandi ukuphakamisa imibuzo malunga nokuziphatha kweprojekthi. Ngokukodwa, uZevenbergen wayekhathazekile ukuba abantu kumazwe athile bangabonakalisa umngcipheko ukuba ikhompyutha yabo izame ukuvakashela iiwebhusayithi ezinobungcali, kwaye aba bantu abavumelanga ukuthatha inxaxheba kwisifundo. Ngokuxhomekeke kule ngxoxo, iqela le-Encore liguqule le projekthi ukuba lizame ukulinganisa i-Facebook kuphela, i-Twitter kunye ne-YouTube kuba umntu wesithathu uzama ukufikelela kule mihlaba eqhelekileyo ngexesha lokukhangela kwiwebhu (Narayanan and Zevenbergen 2015) .
Emva kokuqokelela idatha ngokusebenzisa loyilo oluchitshiweyo, iphepha elichaza indlela kwaye ezinye iziphumo zathunyelwa kwi-SIGCOMM, inkomfa ye-computer yesayensi. Inkqubo yekomiti yayixabisa umnikelo wezobugcisa bephepha, kodwa yabonisa ukukhathazeka malunga nokungabikho kwemvume enolwazi kubathathi-nxaxheba. Ekugqibeleni, ikomiti yekomiti yagqiba ukupapasha iphepha, kodwa (Burnett and Feamster 2015) ukukhathazeka ngokwemigaqo (Burnett and Feamster 2015) . Isitatimende esinjalo sasingasetyenziswanga ngaphambili kwi-SIGCOMM, kwaye le meko iholele kwingxoxo engakumbi phakathi kwenzululwazi yekhompyutheni malunga nohlobo lokuziphatha kwiphando lwabo (Narayanan and Zevenbergen 2015; B. Jones and Feamster 2015) .